युवाहरुका लागि ठाउँ खालि गरि दिनुपर्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » युवाहरुका लागि ठाउँ खालि गरि दिनुपर्छ
युवाहरुका लागि ठाउँ खालि गरि दिनुपर्छ
प्र्रवक्ता, सद्भावना पार्टी
२७ वर्षको उमेरदेखि सन्तोष मेहता सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ । अहिल उहाँ ३२ वर्षको हुनुभयो । यतिको कम उमेरमै पार्टीका पदाधिकारीमा जानु अन्य युवाका लागि जो राजनीतिकमा लाग्नु भएको छ त्यसका लागि प्रेरणा हुनसक्छ । उहाँ दोस्रो सविधानसभा चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नं. ५ बाट चुनाव पनि लड्नु भएको थियो जहाँबाट उपेन्द्र यादव जित्नु भएको छ । मधेशवादी दलमा युवाको उपस्थिति र भूमिकाको बारेमा सहारा टाइम्सले मेहतासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
२७ वर्षको उमेरदेखि सद्भावना पार्टीको तपाई प्रवक्ता पदमा काम गर्नुभयो, त्यसो भए मधेशको राजनीतिमा युवाको प्रतिनिधित्व कस्तो पाउनु भएको छ ?
–मधेशको कुरा गर्ने हो भने मधेशको राजनीतिकमा युवाहरुको पकडमा अहिले पनि छैन । मधेशको राजनीतिकमा एउटा रुढीवादी परम्परा कस्तो बसी सकेको छ भने बृद्ध (प्रौढ) लाई नै विश्वास गर्ने र नेता मान्ने भनि कुसंस्कार पनि मधेश राजनीतिकमा देखिन्छ । तर, खुशीको कुरा यो पनि हो कि यी परम्पराहरु विस्तारै हट्दै गइरहेको छ । मधेशमा तीन तीन चोटी आन्दोलन भयो । पहिलो मधेश आन्दोलनताका ठूला दलहरुबाट महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, सितानन्दन राय यादव, विजयकुमार गच्छदार, शरतसिह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ता, रेणु यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजस्ता नेताहरु विद्रोह गरेर मधेश राजनीतिमा आए तर सोही दलहरुका तरुण दलका, युवा संघका, नेवि संघका, अखिलका युवा नेताहरु विद्रोह गरेर मधेशमा राजनीतिकमा आएको देखिएन । त्यसैले मधेशमा युवा नेतृत्वको संकट र खाँचो छ ।
युवा नेताहरु नेतृत्वमा जान सकिरहेका छैनन् कि त्यस प्रकारको नेता नै छैन ?
–दुवै कुरा हो । एक त युवामा नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास भएका छैन र यो रातारात विकास हुने कुरा पनि होइन, त्यो एउटा गुण हो, एउटा अभ्यास हो । अर्कोतिर युवाहरु नेतृत्वमा जान चाहेका छन् तर नेतृत्व तहले ल्याउनै चाहेका छैन । एकआध युवालाई नेतृत्व तहमा ल्याइए पनि भूमिका विहिन बनाएर राखेको छ ।
हामीले बुझे अनुसार मधेशवादी दलको संरचना नै यस्तो बनाइएको छ कि युवाले चाहेर पनि नेतृत्व तहमा जान सक्दैन, के यो सही हो ?
–तपाईले भनेको जस्ता संरचना मधेशवादी दलमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विधानको दृष्टिकोणले त्यस्तो कुनै संरचना बनाइएको होइन । तर एउटा परम्परा र सँस्कृति नै बनेको छ कि माथिका पदहरुमा पाको उमेर भएका नेता नै हुनुपर्छ । युवा भनेपछि परिपक्क नहोला, यो अधकचलो होला, यो नेता हुन सक्दैन, नेता बनसिकेको छैन भन्ने खालको सोच नेताहरुमा देखिएको छ । विश्वमा चलन नै आइसकेको छ कि निश्चित उमेरपछि राजनीतिक गर्न पाउँदैन । तर यहाँका नेताहरु जीवनभरि राजनीतिकमै रहन चाहन्छन् । एउटा पदमा जीवन बिताउँन चाहन्छन् । भारतको बीजेपीलाई हेर्नुस् दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई अगाडि सारिरहेको छ । पुराना नेताहरु ठाउँ खाली गर्दै गइरहेका छन् । यहाँ पनि बृद्ध नेताहरुमा इच्छा शक्ति हुनुपर्यो र युवाका लागि ठाउँ खाली गरि दिनुपर्यो ।
तपाईले भन्नु भयो, युवा नेताहरु छन् तर नेतृत्वमा आइरहेका छैन, नआउनुको कारण के हो, ब्रेकर कहाँ राखिएको छ ?
–कुनै युवा पार्टीको नेतृत्व तहमा नआऊन भनेर कुनै पनि पार्टीको विधानले रोकेको छैन । मैले अघि नै भने कि इच्छा शक्ति र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ । परम्पारालाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यति वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, गाउँस्तरबाट काम गरेर आएको हुनुपर्छ, यति पढे लेखेको हुनुपर्छ आदि इत्यादी । यी सब ब्रेकर हुन् तर कुनै पनि पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । सद्भावना पार्टीमा त छदैछैन । नेतृत्व वर्गले युवाहरुलाई पदाधिकारी वा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । माथि विभिन्न पदहरु हुन्छन्, युवाहरुलाई त्यहाँ मज्जाले एडजस्ट गर्न सकिन्छ । तीनटा पद छन् भने एउटा युवाका लागि आरक्षित गर्न सकिन्छ । जस्तो तीनवटा महासचिव छन् भने एउटा युवालाई दिनसकिन्छ । तीनवटा उपाध्यक्ष छन् भने एउटा युवालाई दिनसकिन्छ । केन्द्रीय समिति एकसय सदस्यीय छन् भने त्यहाँ ३३ प्रतिशत युवालाई आरक्षण गर्न सकिन्छ । ६०–७० कटेकाले ४० र त्यसभन्दा मुनीका लागि पद खालि गरेर जानुपर्छ । अब म अभिभावकको भूमिकामा रहन्छु, पार्टीको वरिष्ठ नेतामा बस्छु, सल्लाहकारमा बस्छु भनेर बृद्ध नेताहरुले ठाउँ खाली गरि दिनुपर्छ । यो फर्मुला अपनाइयो भने केही वर्षमै मधेशको राजनीतिक युवाको हातमा जान्छ ।
तपाई आफ्नो पार्टीमा कुन फर्मुलाबाट प्रवक्ता बन्नुभएको छ ?
–१७ वर्ष भइसक्यो, सद्भावना पार्टीमा सक्रिय राजनीतिक गरेको । त्यही सक्रियता कारण सायद मलाई प्रवक्ता बनाएको होला । सायद सक्रियताको फर्मुला नै मेरो हकमा लागु भएको होला । विद्यार्थी मञ्चको एउटा क्याम्पस इकाई कमिटी हुँदै जिल्ला कार्यसमिति हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । युवा भएर पनि मेरो यात्रा सानो छैन, लामै छ । मेरो अवश्यकता र उपयोगिता जहाँ थियो त्यहाँ ल्याइएको हो ।
तपाईको सक्रियता देखेर तपाईलाई पार्टीका प्रवक्ता बनाएको हो भने तपाईसँगै काम गरेका तपाईका सहकर्मीहरु जो पछाडी छन् के उहाँहरु निस्कृय भएर काम गर्नु भएको हो त ?
–मैलो त्यस्तो भन्न खोजेको होइन । सबै साथीहरु सक्रिय हुनुहुन्छ तर सक्रियताका अरु पनि विभिन्न पाटाहरु हुन्छन्, विभिन्न मापदण्डहरु हुन्छन् । कतिको टाइम दिइरहनु भएको छ, रिस्क लिनु भएका छ कि छैन, अरु पनि केही बाध्यताहरु आएको हुनसक्छ । मसँग भएको क्षमता उहाँहरुमा नभएको पनि हुनसक्छ । तर मैले भनेको जस्तो आरक्षित गर्न सक्यो भने थुप्रै युवा साथीहरु आउन सक्छ ।
हामीसँग कतिपय युवा नेताहरु गुनासा गर्छन् कि म पनि मेहता भएको भए प्रवक्ता बन्न सक्थे, यस्तो गुनासो फेरि किन ?
–मेहता भएर के भयो र ? मलाई आश्यर्च लाग्छ यस्तो कुरा सुन्दा । मलाई लाग्दैन कि सद्भावना पार्टीमा म भन्दा सिनियर कुनै मेहता हुनुहुन्छ । कोही मेहता अगाडी छैन त्यो करणले त म झन पछाडी पर्नु पर्ने हो । नेतामाथि आरोप लाग्ने गरेको परिवारवाद, नश्लवाद, जातिवाद, कुटुम्बवाद तर यीमध्ये मेरालागि त केही छैन । न मेरा जाति कोही माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ, नत हाम्रा परिवारका कोही छन्, न कोही कुटुम्ब छन् । अनि मलाई माथिलाई ल्याउने को छ र जो यस्तो गुनासो आयो । यस्तो आरोप बेबुनियाद आरोप हो ।
यत्रो पार्टीमा प्रवक्ता पदमा काम गर्दा कतिको प्रोब्लेमहरु फेस गर्नु परेको हुन्छ ?
–थुप्रै प्रोब्लेमहरु छन् । म १७ वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा छु । सक्रिय कार्यकर्ता जो होलटाइमर हुन्छ, उसको सबभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक नै हुन्छ । हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन कि मधेशका कुनै पनि पार्टीमा पूर्णकालिन कार्यकर्तालाई कसरी राख्ने, कसरी माइनेज गर्ने कुरामा कुनै ध्यान दिएको छैन । पूर्णकालिन कार्यकर्ताको पनि नीजि जीवन होला । त्यसका लागि मुख्य समस्या आर्थिक नै हो । परिवारवाद, जातिवाद, कुटुम्बवादले पनि कहिले काही पीडित भएको महसुस हुन्छ । पार्टीले बेलाबेलामा प्रशिक्षणका व्यवस्था गर्नुपर्छ, राजनीतिकमा दक्ष कार्यकर्ता कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ यी समस्याहरु हुन् । तर अरु पार्टीको तुलनामा हाम्रो पार्टी अलि व्यवस्थित हुन खोज्दैछ । म त पार्टीको प्रवक्ता हुँ तर प्रवक्ताको काम कर्तव्य अधिकारभन्दा बढी पार्टीका अन्य कार्यहरु बढी गर्छु । तर म गुनासो गरेको छैन ।
पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सञ्चारसँग सरोकारको विषय हो त्यसका लागि पार्टीमा के कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
–मिडिया सञ्चालन वा परिचालनमा अरु पार्टीभन्दा सद्भावना पार्टी अगाडि छ । यसमा अरु नेताहरु पनि लाग्नु भएको छ तर म प्रवक्ता भएको कारणले मुख्य जिम्मेवारी मेरै हो । तर सोचे जस्तो सफल भइरहेको छैन ।
तपाईको पार्टीको कुनै सुचना वा समाचार आउँदा अन्य नेताहरुको माध्यमबाट बढी नै आइरहेका हुन्छन् तर मिडियाको जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएका तपाईमार्फत धेरै कम आइरहेका हुन्छन् किन ?
–यो त गम्भीर कुरा हो । प्रवक्ता भनेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । पार्टीको आधिकारीक कुरा बाहिर ल्याउने व्यक्ति नै प्रवक्ता हो । पार्टीमा नेताहरु अलि कम व्यस्त भएको, मिडियासँग पुरानो सम्बन्ध भएको कारणले होला प्रवक्ता भन्दा बढी अन्य अन्यको माध्यमबाट सुचनाहरु जान्छ । अर्को कुरा के हो भने मेडियालाई पनि ठूलै पोस्टका नेताहरुबाट सुचना चाहिएका हुन्छन् र हाम्रो पार्टीमा पत्रकारका लागि ठूला नताहरु पनि सहजरुपमा पनि प्राप्त हुने भएकाले प्रवक्ताको माध्यमबाट सुचना नगएको हुनुपर्छ । म भन्छु, यसमा पार्टीका साथ साथै मिडिया पनि त्यतिकै दोषी हुन्छ । पार्टीले पनि कुनै सुचना दिँदा प्रवक्तामार्फत दिनु पर्ने हो र मिडियाले पनि कुनै सुचना लिँदा प्रवक्तामार्फत लिने हो ।
फेरि अघिकै कुरामा फर्कौ, कतिपय युवाहरु कुनै खास नेता तथा अध्यक्षको पिछलग्गु भएर घुमिरहेका हुन्छन्, त्यसैमा रमाउन चाहेका हुन्छन्, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–युवाहरु केही सिक्नका निम्ति कुनै नेताका पछाडि गएको हुनसक्छ । नेताका सम्मानका लागि पनि उसको पछि लागेको हुनुपर्छ । सम्मान गर्नै हुँदैन, नेताको पछि जानै हुँदैन, त्योसँग कुरै गर्न हुँदैन यदि भनियो भने त्यसले अर्को अराजकता निम्त्याउँछ । नेतालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर गुलामी गर्नुहुँदैन भनि युवाले त्यति ध्यान राख्नु पर्यो । केही युवामा गुलामी प्रवृति पनि देखिएको छ ।
यही गतिमा पार्टीको गतिविधि चलि रह्यो भने युवालाई कति समय लाग्छ पार्टी नेतृत्वमा आउन ?
–समाज परिवर्तनशिल छ त्यो थ्योरी पनि लागु हुन्छ होला तर पार्टी त्यो सिद्धान्तले हिड्नु हुँदैन । पार्टीमा एउटा सिस्टम बसाउनु पर्छ । एउटा नियम बनाउनुपर्छ । त्यो अनुसार परिवर्तन भइरहोस् । ३३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व पार्टीको विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । उमेर हद तोक्नु पर्छ । यदि यस्ता व्यवस्था गर्यो भने युवाहरु समयतालिका अनुसार आफै नेतृत्व तहमा आउँछन् तर जुन तरिकाले वा पार्टी अध्यक्षको तजबिजमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ त्यसले त युवा कहिले हो कहिले नेतृत्व पाउने । तर समाज परिवर्तनशिल छ । त्यसको आधारमा युवा आउन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा मधेशवादी दलका युवाहरुको क्यारियर अन्योलमा छ भने त्यसो भए ?
–तपाईले भनेको जस्तो अन्योलनमै त होइन । सदभावना पार्टीमा युवाहरु ठिक ठिकै ठाउँमा छन् । हाम्रा पार्टीका महासचिवहरु, उपाध्यक्षहरु युवा नै हुनुहुन्छ । युवाहरुको क्यारियर अन्योलमा छ भन्न मिल्दैन, युवामा धेरै सम्भावना छ सिस्टमले गयो भने युवाको भविष्य उज्जव छ ।